Iintembelelo ezine zokuPhumela iziPhene kwiSitatimende
Izihlandlo zokuzithemba ziyinxalenye ebalulekileyo yamanqaku angabonakaliyo. Singasebenzisa ubuninzi kunye nolwazi ukusuka kusasazo esinokwenzeka ukuqikelela iparameter yoluntu ngokusebenzisa isampuli. Ingxelo yenqanaba lokuzithemba lwenziwa ngendlela enokuqondwa kakuhle. Siza kujonga ukuchaneka ngokuchanekileyo kwexesha lokuzithemba kunye nokuphanda iimpazamo ezine ezenziwe malunga nale ndawo yeenkcukacha.
Yintoni Ithemba Lokungenelela?
Ixesha lokuzithemba liyakuboniswa njengoluhlu lwexabiso, okanye kwifom elandelayo:
Linganisa ± Margin of Error
Ixesha lokuzithemba liqhelekile ngokubhekiselele kwizinga lokuzithemba. Amanqanaba okuzithemba aqhelekileyo anama-90%, ama-95% kunye nama-99%.
Siza kujonga umzekelo apho sifuna ukusebenzisa isampula kuthetha ukuthatha inqanaba labantu. Masithi le nto ibangela ukukhawuleza kwintembeko ukusuka kwi-25 ukuya ku-30. Ukuba sithi sinamaqela angama-95 enethemba lokuba abantu abangabonakaliyo bathetha kuluhlu, ngoko sithetha ukuba sifike ithuba lokusebenzisa indlela ephumelele ukunika iziphumo ezichanekileyo ezingama-95% kwexesha. Ekuhambeni kwexesha, indlela yethu ayiyi kuphumelela i-5% yexesha. Ngamanye amagama, siya kuphumelela ekuthineni inani lokwenene lithetha kuphela enye kwezihlandlo ezingama-20.
Ukuzithemba kweNkcazo yeMistake One
Ngoku siza kujonga uluhlu lweempazamo ezahlukileyo ezingenziwa xa sisebenzisana nexesha lokuzithemba.
Isitatimende esinye esingafanelekanga esenziwa rhoqo malunga nexesha lokuzithemba kwinqanaba le-95% lokuzithemba kukuba kukho ithuba elingu-95 lokuba ixesha lokuzithemba lithetha inyaniso yinyani yabemi.
Isizathu sokuba le mpazamo yinyani. Iingcamango eziphambili malunga nexesha lokuzithemba kukuba ukusetyenziswa okungena emfanekisweni ngendlela esetyenziswayo, ekunqumeni ixesha lokuzithemba kukuba libhekisela kwindlela esetyenziswayo.
Iphutha lesibini kukutolika i-interval of confidence ye-95% ethi 95% yazo zonke ixabiso lwedatha kubemi liwela phakathi kwexesha. Kwakhona, ama-95% athetha kwindlela yokuvavanya.
Ukuze sibone ukuba kutheni isingeniso esingasentla singayilunganga, sinokucinga ngokubaluleka komntu oqhelekileyo ngokuchithwa okuqhelekileyo kwe-1 kwaye uthetha nge-5. Isampuli esineenkalo ezimbini zeedata, ngasinye sinexabiso le-6 sinentsingiselo ye-6. Ixesha lokubaluleka koluntu luya kuba ngu-4.6 ukuya ku-7.4. Oku kucaca ukuba akukho-95% kokusasazwa okuqhelekileyo , ngoko ayiyi kuba ne-95% yabemi.
Impazamo yesithathu kukuthi i-interval of confidence ye-95% ibonisa ukuba i-95% yazo zonke isampuli zendlela isweleka kwixesha lexesha. Cinga kwakhona umzekelo ukusuka kwicandelo lokugqibela. Naliphi na isampula yobunzima bobabini obunamanani angamaxabiso angaphantsi kwama-4.6 aya kuba nenjongo yokuba yayingaphantsi kwama-4.6. Ngaloo ndlela iisampuli zithetha ziza kungena ngaphandle kwexesha lokuzithemba. Iisampuli ezifanisa le nkcazo ye-akhawunti engaphezulu kwe-5% yemali. Ngoko kuyiphutha ukuthetha ukuba eli xesha lokuzithemba lithatha i-95% yazo zonke iisampuli iindlela.
Iphutha lesine ekujonganeni nexesha lokuzithemba kukucinga ukuba yimiba yodwa yempazamo.
Nangona kukho umda wephutha ehambelana nexesha lokuzithemba, kukho ezinye iindawo apho iimpazamo zingena kwi-analysis analysis. Imizekelo emibini yeentlobo zeziphene zingabikho kwi-design engalunganga yolu vavanyo, ukunyaniseka kwisampulu okanye ukungakwazi ukufumana idatha kwi-subset ethile yabemi.
Thayipha i-I kunye ne-Type II Iiphene kwi-Statistics
Yiyiphi iSasazo sokuSamphula
Kutheni Kuthetha Ukungaphumeleli KuVavanyo kwi-Test Hypothesis?
Umthandazo kwiNdlu yabameli be-Kansas yavelisa iFuror
I-Organic Architecture njengeSixhobo soKwakha
Inkonzo yabaThengi - Ukujongana nezikhalazo
Live Fast, Die Young, Yakha i-Galaxy Beautiful